Hordhac: Real Madrid vs Cadiz - Zidane Oo Hoggaanka Horyaalka Sii Dheeraysan Kara, Shaxda Macquulka Ah Iyo Wararka Dhaawacyada & Ganaaxyada - Gool24.Net
Hordhac: Real Madrid vs Cadiz – Zidane Oo Hoggaanka Horyaalka Sii Dheeraysan Kara, Shaxda Macquulka Ah Iyo Wararka Dhaawacyada & Ganaaxyada
Real Madrid ayaa raadinaysa guushii afraad oo xidhiidh ah ee horyaalka LaLiga ee xili ciyaareedkan marka ay maanta garoonkeeda kusoo dhoweyso naadiga kasoo dallacay heerka labaad ee Cadiz.
Los Blancos oo horyaalka ay xili ciyaareedkii hore ku guuleysatay difaacanaysa ayaa waxay leedahay toban dhibcood oo ay ka urursatay saddexdii guulood iyo barbarrihii ka horreeyey ee afartii ciyaarood ee ay illaa hadda soo dheeshay, waxaanay haysaa hoggaanka horyaalka, halka Cadiz ay fadhido booska toddobaad oo shan ciyaarood oo ay soo dheeshay ay ka heshay toddoba dhibcood.
Madrid ayaa September 20 ciyaartay kulankeedii ugu horreeyey xili ciyaareedkan, waxaanay barbarro goolal la’aan ah ku kala baxeen Real Sociedad, laakiin intii ka dambaysay ay min saddex dhibcood kasoo qaateen Real Betis, Real Valladolid iyo Levante, waxaana inkasta oo ay xilli hore tahay oo aan waxba laga saadaalin karaynin horyaalka, haddana muuqata in kooxda Zidane ay diyaar u tahay inay difaacato koobka.
Rajada Real Madrid ee xili ciyaareedka ayaa sawir buuxa laga heli doonaa marka ay toddobaadka dambe iska hor yimaaddaan Barcelona oo ay ugu tegi doonto Camp Nou iyo Shakhtar Donetsk oo Arbacada toddobaadkan ay kulanka koowaad ee Champions League ee xili ciyaareedkan foodda isku dari doonaan.
Los Blancos oo aan xagaagii tegay wax ciyaartooyo ah lasoo saxeexan ayaa isku hallayn doonta Karim Benzema iyo Sergio Ramos oo ah hoggaamiyeyaasheeda.
Madrid iyo Cadiz ayaan wax kulan horyaalka ah ku kulmin intii ka dambaysay xilki ciyaareedkii 2005-06 oo ahayd waqtigii ugu dambaysay ee naadigaasi uu horyaalka ka ciyaaro, waxaana kulankoodii ugu dambeeyey 3-1 ku badisay Real Madrid.
Ciyaarta: Real Madrid vs Cadiz
Real Madrid waxa ka maqan difaacyahannada baasha midigta ee Dani Carvajal iyo Alvaro Odriozola oo dhaawac ah, waxaanay u badan tahay in booskaas uu qaban doono Nacho.
Eden Hazard ayaan taam u ahayn illaa kulanka El Clasico ee toddobaadka dambe, waxaana liiska dhaawacyada kaga daba tegay Martin Odegaard, halka Mariano uu wali ku jiro liiskan.
Laakiin Zidane ayaa war fiican ka helay Ede Militao iyo goolhaye Thibaut Courtois oo kusoo laabtay kooxda, halka Toni Kroos oo labadii ciyaarood ee ugu dambeeyey maqnaa uu usoo ciyaaray qarankiisa oo uu taam yahay.
Luka Modric ayay u badan tahay in la nasiyo ciyaartan, waxaana fursad heli doona Isco oo ka garab ciyaari doona Toni Kroos iyo Casemiro.
waa halis in ay badisa real madrid